သင်္ချိုင်းကုန်းထဲမှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ! - Grand Parents-Day
Home / Unlabelled / သင်္ချိုင်းကုန်းထဲမှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ!
သင်္ချိုင်းကုန်းထဲမှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ!
ကြည့်စမ်း ငါ့သားသမီးတွေ ဘယ်လောက်ချောလဲ။ ကျန်းမာရေး ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ ဖျားနာနေတာ မင်းတို့မြင် ဘူးလာ။ ဥာဏ်ရည် ဆိုတာလည်း ငါ့သားသမီးတွေ ကျူရှင်တောင်မယူနိုင်ဘူး။ရွာကနေ ကျပ်ပြင်ကျောင်းသွားတတ် နေရတာ။ မင်းတို့စဉ်းစားကြည့် မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ သုသာန်တစ်စ သင်္ချိုင်းဝက လူသေလွှမ်းတဲ့အဝတ်တွေ ကောက်ယူ တော်မူပြီး ပံ့သုကူသင်္ကန်းချုပ်ပြီး သုံးဆောင်တော်မူသေးတာ မင်းတို့ငါတို့လို ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကောင်တွေက ရှောင်တယ်ဆိုတာ ရယ်စရာကြီးကွ။
ကျောင်းစကိုရှောင် မသာစကို “ဆောင်”ဆိုတဲ့အဆိုလည်းရှိသားပဲကွာ။ ကျောင်ပစ္စည်းယူသုံးရင်သာ အပြစ်ရှိမယ် သင်္ချိုင်း ပစ္စည်းယူသုံးရင် အပြစ်လုံးဝမရှိဘူးကွ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်္ချိုင်းဆိုတာ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ လုံးဝသံယောဇဉ် အတွယ်အတာမရှိပဲ စွန့်ပစ်ထားတဲ့နယ်မြေ အဲ့ဒီနယ်မြေထဲက ပစ္စည်းမှာ ဘာအနှောင်အတွယ်မှ မရှိကြဘူး။
အလကားပါကွာ လူတွေကိုက အယူသီးနေ တာပါ သင်္ချိုင်းတဲ့ မင်းတို့စဉ်းစားကြည့် သင်္ချိုင်းဆိုတာက ကြာကြာတစ်ခါ မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ ပါးစပ် တွေ ကိုကြည့်စမ်း။ ငါးပုပ်ရင် ဆားနဲ့နယ်ပြီး ငါးဆားနယ်ဆိုပြီး စားကြတယ်။ ကြက်သေ/ဝက်သေ/ဘဲသေ/ ငါးသေ/ နွားသေ/ ဆိတ်သေတွေကွာ။ စဉ်းစားကြည့်ကြ။အဲ့ဒါလည်း အသုဘ တွေပဲကွာ။ ကြက်မသာ/ဝက်မသာ/နွားမသာ တွေပဲကွာ။ဒါတွေကြတော့ အသုဘ လို့မမြင်ဘဲ သုဘလို့ထင်ပြီး ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်စားကြတယ်။ မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ ပါးစပ်သင်္ချိုင်း ထဲက ဘအဲ့ဒီလိုတိရိစ္ဆာန်အသေကောင်တွေ မနည်းမနောဝင်ပြီးပြီနော်။ ဒါကြတော လောကနိယာမ ကောင်းမွန်တဲ့ အစားအစာလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။ သူလည်း ခန္ဓာငါးပါးအစုအဝေး အပုပ်ကောင်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ မသန့်တာက အဲ့ဒီပါးစပ်သင်္ချိုင်းပဲကွ။